Firongatry ny valanaretina: miisa 91 ireo nifindran’ny Covid-19 tao anatin’ny iray andro | NewsMada
Misoko mangina. Nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny CCI Ivato, omaly, nanoloana ny depiote fa miakatra ny tahan’ireo tratry ny Covid-19.
Miisa 91 izany tao anatin’ny iray andro ka anisan’ny tena ahitana izany ny any Vakinankaratra, Matsiatra Ambony ary Analamanga, araka ny nambarany.
Manoloana izany indrindra, noraisina ny fepetra amin’ny fifandraisana amin’ny atsy Afrika Atsimo, niainga amin’ny filankevitry ny minisitra. Mikatona amin’i Afrika Atsimo ny habakabak’i Madagasikara manomboka izao. Noraisina izany fepetra izany noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19 sy ny fisian’ilay « variant Omicron », efa miparitaka any amin’ireo firenena afrikanina sasany. Mamono haingana ary haingam-pifindra ity aretina vaovao ity ka mila fahamailoana tanteraka.
Efa mikatona tanteraka ihany koa nanomboka ny 27 novambra teo ny sidina ana habakabaka mampifandray ny Nosy Maorisy sy i Madagasikara noho ny firongatry ny valanaretina, mahafaty olona betsaka any an-toerana.
Na izany aza, tsy mbola voaporofo ny fisian’ilay « variant Omicron » eto amintsika. Efa manana ny fitaovana, hiaka farany « Séquenceur » ny laboratoara LA2M etsy Androhibe, ahafahana mamantatra ireo karazana « variant Covid-19 ».
Mandeha ny fizarana CVO
Ho fanamafisana hatrany ny ady amin’ny fiparitahan’ny aretina eto Madagasikara, nanomboka omaly ny fizarana ny CVO tambavy eto Analamanga. Midina isam-baravarana mihitsy ny ekipa mizara izany. Mifarimbona ny ekipan’ny Dasp eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika miaraka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Nisitraka izany CVO izany, omaly, ny fokontany efatra eto Antananarivo Renivohitra (Ivandry, Fiadanana, Ambatobe, Ambohipo) sy fokontany efatra ao amin’ny distrikan’ Ambohidratrimo (Ambohibao, Talatamaty, Amboropotsy, Ambohidratrimo).
Manodidina ny 32.088 ireo olona 18 taona mihoatra, katsahina ho voaaro amin’ny fahasalamana mandritra ny hetsika fizarana omaly.